Iifowuni ezintlanu zoMgangatho oPhakamileyo kunye ezinokuthenjwa | I-Androidsis
UElvis bucatariu | | IsiTshayina Android, Iiselfowuni
Xa sithetha ngezinto ezivela e-China, sinezinto ezinesimo sengqondo seemveliso ezingalunganga. Kodwa izinto ziyekile ukuba njalo kudala, kwaye umzi mveliso we-smartphone uthetha ngokubanzi ngengxabano yethu.
Namhlanje zininzi ii-mobiles zaseTshayina kwimarike, ezinye zazo zenziwe kuphela e-China kwaye zezezinto ezaziwayo, ngelixa ezinye zenziwe ngqo ngabavelisi bendawo e-China. Ezi mobiles zinokungaziwa kakhulu, kodwa oko akuthethi ukuba bangaphantsi kweefowuni ezithandwa kakhulu.
Ngesi sizathu, kule posi siza kukubonelela ngeefowuni ezintlanu zaseTshayina ezibandakanya uluhlu olubanzi lohlahlo-lwabiwo mali kunye neenkcukacha.
1 Iselfowni yaseTshayina eneempawu zokugqibela eziphezulu: LeTV LeEco Le Max 2
2 Iselfowuni elungileyo kunye nexabiso eliphantsi: IDoogee X5 Max Pro
3 Iselfowuni yaseTshayina enokuzimela okuninzi: Leagoo Lead 7
4 Iselfowuni yokuqala yaseTshayina: ZTE Axon 7
5 Ixabiso eliphantsi nelithembekileyo lamaTshayina: iMeizu Metal
Iselfowni yaseTshayina eneempawu zokugqibela eziphezulu: LeTV LeEco Le Max 2
I-LeTV LeEco Le Max 2 sisiphelo esiphakamileyo saseTshayina, ngaphakathi esingumqhubekekisi Snapdragon 820kunye I-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yendawo yokugcina idatha, efanelekileyo yokugcina zonke iifoto oza kuzithatha ngekhamera ye-21 megapixel.
Isikrini seLeTV LeEco Le Max 2 inayo 5.7 intshi kwaye isisombululo sayo sithi 2560 x 1440 pixels. Ukongeza, i-smartphone isebenzisa i-Android 6.0 nge-eUI 5.6 ngokwezifiso zongqimba.
Iselfowuni elungileyo kunye nexabiso eliphantsi: IDoogee X5 Max Pro
I-smartphone IDooGee X5 Max Pro yiza nekhusi 5 intshi IPS kunye nokusonjululwa kwee-pixels eziyi-1280 x 720, ngelixa ikhamera ine-8 megapixel sensor. Ibhetri yindawo eyomeleleyo yeDooGee X5 Max Pro, njengoko inesakhono sayo 4000mAh.
Iselfowuni ikwabonelela I-2GB ye-RAM, Inkqubo ye-quad6737-core 1.3GHz ye-MTXNUMX kunye nenkxaso ye sim ezimbini.
Iselfowuni yaseTshayina enokuzimela okuninzi: Leagoo Lead 7
I-Leagoo Lead 7 siselfowuni eTshayina onokuthi uthembele kuyo ukuba ufuna ibhetri eya kukugcina nangaphezulu kosuku. Ngamandla e 4500mAh, uya kuba nokuzimela okungaphezulu kokulingeneyo, kuba isikrini sayo kuphela 5 intshi Isisombululo sayo sifikelela kwi-1280 x 720 pixels.
I-smartphone nayo inayo I-1GB ye-RAM kunye neprosesa ye-quad-core ye-1.3GHz. Ukongeza, izisa inkxaso sim ezimbini (enye mini-Sim kunye nano-SIM enye) kunye nenye Ikhamera engasemva eyi-13 megapixelNgelixa inzwa yee-selfies iyi-8 megapixels.
Iselfowuni yokuqala yaseTshayina: ZTE Axon 7
El ZTE Axon 7 Ineenkcukacha ezintle, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo iprosesa yayo yeQualcomm Snapdragon 820, ebaleka kwi-2.15 + 1.6 GHz, kodwa nakwimemori yayo 4GB RAM.
I-smartphone inayo Imemori yangaphakathi ye-64GB, kodwa ngenkxaso ye microSD ukuya kuthi ga kwi-128GB. Iscreen sakho AMOLED inesisombululo sama-pixels angama-2560 x 1440 kunye nobukhulu be 5.5 intshi.
Okokugqibela, ikhamera yale mobile inokurekhoda kwisisombululo 4K Enkosi kwisenzi sayo I-megapixels ze-20Ngelixa ikhamera yangaphambili iyi-8 MPx.
Ixabiso eliphantsi nelithembekileyo lamaTshayina: iMeizu Metal
I-Meizu Metal izisa uyilo olunomtsalane kunye nesisa Iscreen se-intshi eyi-5.5 ngesisombululo esipheleleyo se-HD kunye nokukhuselwa kweDinorex T2X-1. Ikhamera inenzwa I-megapixels ze-13Ngelixa ikondari ifikelela kuphela kwisisombululo see-megapixels ezi-5.
Iselfowuni ikwabandakanya 2GB ye-RAM, 16GB yememori yangaphakathi ngenkxaso ye microSD, iprosesa ye-octa-core ye-2GHz kunye nebhetri ekwaziyo 3140mAh.
Ewe uluhlu lwabenzi baseTshayina abanzi lubanzi kakhulu kwaye unokufumana iimodeli ezintle nezinexabiso eliphantsi ze-smartphone, ngokuqinisekileyo kwixa elizayo siza kubuya nenxalenye yesibini yeli nqaku.
Kwakhona, ukuba kudala usebenzisa iselfowuni yesiTshayina kwaye khange ube nangxaki ngayo ukuza kuthi ga ngoku, ungathandabuzi ukusixelela ngamava akho kwicandelo lamagqabaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iinqwelo ezintlanu ezikumgangatho ophezulu nezithembekileyo zamaTshayina
NdineDoogee X5 Max Pro kwaye ngekhe ndiyicebise. Unayo ifayile kwinkqubo eyenza ukuthengisa okungafunekiyo kwaye uyicime kufuneka uyincothule neengcambu. Luphupha lokwenyani olusebenzayo. UDoogee akazange aphinde.
Kunye namaxabiso? Awubeki enye!
UJavier Ruben Garcia Suarez sitsho
Ngaba ikhona into oyithethayo ngoXiaomi? Egqibelele
umgangatho kunye nexabiso?
Phendula kuJavier Ruben Garcia Suarez
Kule posi bendifuna ukugxila ikakhulu kwiimpawu ezingaziwayo zaseTshayina phakathi kwabasebenzisi. UXiaomi ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zibalaseleyo, kodwa sele idume kakhulu kwihlabathi liphela. Enkosi ngezimvo zakho kunye nokuzithoba!
Edgar araiza sitsho
Kwaye iXiaomi yeyona ilungileyo
Phendula uEdgar Araiza
UAlejandro Del Nogal sitsho
Ingxaki ngee-mobiles zaseTshayina zomsebenzisi ophakathi kukuba kuya kufuneka ufunde ukubeka phambili ukufaka iirom kwaye uhlala usithenga esona sithuthi silulungelelwano lwentengiso ukusukela oko kungaphakathi, oko kukuthi, akukho baphuhlisi abanazo kwaye ngenxa yeso sizathu abayikhuphi phantse iirom.
Phendula u-Alejandro Del Nogal
UJoe maveyk sitsho
Olu thelekiso lukwenza ubonakale umbi, kuyacaca ukuba bayakhuthazwa ukuthelekisa kwaye abananto yakwenza nenyani, abantu sele besazi kakhulu ukuba bangaqhathwa.
Ndiyitshintshe eyam i-iPhone 6plus yasimahla yeXiaomi mix 6gb kunye ne256gb, kwaye yeyona nto ndiyenzileyo, njengoko ndinjalo, abanye abantu nabanye abantu abathenga ezinye izinto ezinje ngala wena udikiweyo, ndaye ndacinga ngaphambi kokuthumela.
Phendula uJoe maveyk
IGionee S10, i-smartphone eneekhamera ezi-4, i-6 GB ye-RAM kunye ne-Android 7.0 Nougat